Barnaamijyada Miisaaniyadda ee ugu Fiican Lamaanayaasha - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Barnaamijyada Miisaaniyadda Ugu Fiican Lamaanaha
Lacagtu had iyo jeer waxay ku jirtaa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee lammaanuhu u galaan dhammaan noocyada khilaafaadka.
Waxay noqon kartaa mid aad u daalinaysa maareynta maaliyaddaada shaqsi ahaan, kaligeed, iskaba daa maareynta dhaqaalahaaga adiga iyo qof kale. Tani waxay sii noqonaysaa mid daal badan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhowr siyaabood oo jira cadaadiska la socda maareynta lacagta ee cilaaqaadka.
Marka lamaanayaashu si fiican u maareeyaan dhaqaalaha, waxaad ogaataa in uu jiro socod isgaarsiineed oo wanaagsan iyo jiritaanka guri abaabulan oo la isku duway.
Aad bay muhiim u tahay in lammaaneyaashu ay dib u eegaan dakhligooda, halkii la doorbidi lahaa, labada lamaane waa inay sidaan wada sameeyaan si ay u helaan qoraal sax ah oo ku saabsan sida kharashkoodu noqon doono.
Waa inay yimaadaan erayga inay jiraan baahiyo iyo rabitaan. Wakhti kasta, baahiyuhu waa inay had iyo jeer ka hor yimaadaan rabitaanka.
Hadda, sababtaas awgeed, waxay meel dhigeen APPS kala duwan si ay u sii yareeyaan cadaadiska maamul -xumada labada lamaane ama labadaba. Waxay u qorsheeyeen APPS-kan inay ka caawiyaan lamaanayaasha inay yeeshaan miisaaniyad-habaysan oo habaysan wakhti kasta.
Halkan waxaa ah dib u eegista su'aalaha soo socda si aad si fiican ugu fahamto nuxurka Barnaamijyada Miisaaniyadda ee lamaanaha.
Akhriso: 10 -ka ugu sarreeya Barnaamijyada Miisaaniyadda Bilaashka ah 2021 -ka
Ma jiraa Miisaaniyad Miisaaniyadeed oo loogu talagalay Lammaanaha?
Haa. Waxaa jira barnaamijyo dhowr ah oo miisaaniyadeed oo loogu talagalay lamaanayaasha si ay u maareeyaan dhaqaalahooda si habboon. Waxaan ku eegi doonaa dhowr ka mid ah APPS dib -u -eegistaan.
Akhri Sidoo kale: Maxay tahay in Miisaaniyadayda Xaashida Xaashidu ku jirto? Muunado & Template
Sidee ayay tahay in Lammaanaha is qaba ay u bilaabaan Miisaaniyadda?
Qor dhammaan ilaha dakhliga
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee la sameeyo waa isku -darka dhammaan dakhligaaga. Tani waxay noqon kartaa mushaarkaaga iyo adeegyada kale ee ay bixiyaan khubaradu.
Bixinta waa inay noqotaa mid hufan. Lammaanaha is -qaba waa inay go'aansadaan inay yeeshaan akoonno wada -jir ah, in kasta oo lammaaneyaasha kale ay doorbidaan inay lacagtooda gooni u ahaadaan.
Faham caadooyinkaaga kharashka
Waxaa jira laba qaybood oo shakhsiyaad u leh maamulka lacagta. Waxaan leenahay 'Kharash -bixiyayaasha' iyo 'Savers' labaduba waa inay awoodaan inay is -kabaan.
Waa inaad had iyo jeer tixgelisaa waxa muhiimka ah ee ah inaad qorsheysato oo aad si fiican u sameyso qaabeynta daqiiqado marka aad yeelan karto “wada hadal lacag” ah marka aysan jirin wax carqaladeyn ama kala goyn carruurtaada.
Waxaa muhiim ah in lammaaneyaasha, marka ay go'aaminayaan inta lacag ah ee ay ku baxayaan, ay ogaadaan xadkooda. Deji tilmaamaha oo labadiinuba waxaad hubin doontaan inaad u hoggaansamaan xeerarkan.
Badbaadi! Badbaadi! Badbaadi!
Si kasta oo ay tahay inta lacag ee aad qarashgareyso, hubso inaad keydiso intii suurtagal ah.
Baadhid: 10 Tallaabo oo Miisaaniyadda Loogu Sameeyay Hab Fudud 2021
Sideen ula Wadaagi Karaa Miisaaniyaddayda Xaaskayga?
1. Tiro geli waxa aad qarashgareyso –waxaadna u baahan tahay inaad qarashgareyso
Tallaabada ugu horreysa ee habaynta miisaaniyadda waa in la sameeyo kormeer muuqaal kooban oo ku saabsan waxa ay yihiin kharashyada bishii. Markaa si fiican u samee si aad u daabacdo una nuquliso bayaannada kaarka deynta, hubi biilashaada bishiiba, oo hel tabarucaadkaaga caymiska.
2. Noqo Run ama Daacad
Hal dariiqo oo aad mar walba ugu dhegi karto miisaaniyaddaada ayaa ah inaad samayso miisaaniyad la taaban karo oo aad ku bilowdo.
Tusaale ahaan, uma malayn kartid inaad ka badbaadisid $ 2000 mushahar dhan $ 4000 bishii haddii kiradaada billaha ahi ay ka badan tahay $ 900, taasi waa mid xaqiiqda ka fog.
Qodobka la xiriira: 10 Siyaabood Oo Fudud Oo Lacag Loogu Kaydsan Karo Miisaaniyad Adag Sannadkan
3. Waa inaad meel dhigtaa dhaqaalihii gurmadka.
Ka sokow samaynta qodobbada waxa qoysku u baahan yahay, ku rid miisaaniyadda gurmadka meel xaalad degdeg ah.
Miisaaniyadda deg -degga ah waxay daryeeshaa culayska lacagta iyo soo -jeedin cajiib ah ayaa labanlaabmi doonta ama xitaa laban -laabmi doonta qaddarka marka la kaydinayo.
4. Labadiinu waa inaad go'aansataan sida loo maareeyo akoonkaaga shaqsiyeed iyo kan wadajirka ah
Mararka qaarkood, go'aan qaadashada mid kasta way adkaan kartaa.
Laakiin labadiinaba waa inaad si fiican u ogaataan qaab -dhismeed miisaaniyadeed oo aad labadiinnu u qaabisheen, iyadoon loo eegin cidda kasbatay wax badan.
Waa inaad raacdaa miisaaniyadda aad samaysay si waafaqsan.
Lammaanaha ma isticmaali karaan App -ka Mint?
App-ka Mint-ka ayaa ah midka ugu habboon lamaanayaasha damacsan xal miisaaniyad-dayactir hooseeya.
Waxay u adeegsan karaan barnaamijkan koontooyin bangi oo kala qaybsan, ama waxay ku dari karaan koontooyinkooda shaqsiyeed.
Waa maxay App -ka Miisaaniyadda ugu Fiican ee Lamaanaha?
Waxaa jira dhowr barnaamij oo miisaaniyad lacag la'aan ah oo lammaaneyaasha ay tixgeliyaan, laakiin kan ugu fiican ayaa weli ah barnaamijka Zeta sababta oo ah heerka daahfurnaanta oo si gaar ah loogu talagalay lamaanayaasha, ugu dambayntiina waxay leedahay astaamo gaar ah oo gacan ka geysanaya yareynta cadaadiska lacagta.
Waxaan haynaa liis badan oo ah Barnaamijyada Miisaaniyadda ee Lammaanaha, si kastaba ha ahaatee, waxaan eegi doonnaa sidoo kale inaan dib u eegis ku sameyn doonno qaar ka mid ah APPS Miisaaniyadda ugu Fiican lamaanaha sannadka 2021.
1. Hantida Qofka
App -kan wuxuu ku koray mid ka mid ah barnaamijyada maaliyadeed ee ugu caansan dhalinyarada waaweyn, iyo dhalinyarada.
Si kastaba ha noqotee, lammaaneyaasha doorta inay la socdaan lacagtooda waxay adeegsadaan barnaamijkan. App -kan ayaa aad waxtar ugu leh caawinta xallinta dhibaatada cadaadiska lacagta iyo, dabcan, sababtaas awgeed, waa muran la'aan mid ka mid ah barnaamijyada miisaaniyadda bilaashka ah ee ugu wanaagsan lamaanayaasha.
Mid ka mid ah astaamaha muhiimka ah ee barnaamijkan ayaa ah inay dhammaan akoonnadaada maaliyadeed ku keeni karto hal meel oo ammaan ah.
Waa barnaamij bangi oo loogu talagalay dhammaan dadka da 'kasta iyo qoys walba leh. Dunida bangigu ma aha inay ku adkaato wax ka qabashadeeda.
App -kan wuxuu bixiyaa sida ugu wanaagsan ee bangiyada - taasoo ka dhigaysa mid ka sii fiican, ka fudud, oo fudud.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad ugu abuurto koonto App -ka lacag dhigasho toos ah oo leh ikhtiyaarka Premium ee hadda, lacagtaadu waxay gasho koontadaada wax ka yar laba maalmood.
Intaa waxaa dheer, khidmadaha qarsoon ama khidmadaha hadda waxay noqdeen wax taariikh ah. Had iyo jeer waxaa jira liis qiimeyn la keenay.
3. Bangiga Internetka ee Stash
Stash App waa koonto jeeg-gacmeed-saaxiibtinimo leh oo laga helo App-ka, oo leh hormuud qiime jaban ah, dhammaan-hal-sanduuq maaliyadeed oo loogu talagalay maal-gashadayaasha gacmaha ka laalaada.
Waxa kale oo ay la timaaddaa iyada oo aan lahayn khidmado bangi oo qarsoon ama khidmado ah, ma jiraan wax khidmad ah oo ku jira shabakadda Automatic Teller Machine, sidoo kale aan lahayn deebaaji ugu yaraan ama shuruudaha dheelitirka ee sii socda.
Bangiga Stash Online wuxuu u dhaqmaa sida xulasho aad u fiican macaamiisha jecel inay ku sameeyaan maalgashigooda iyo bangiyada isla goobtaa.
4. Qorrax -soo -baxa
Barnaamijkan wuxuu bixiyaa badeecado dhammaystiran oo laga yaabo inay sidoo kale buuxiyaan baahiyaha maaliyadeed ee lamaanaha.
Intaas waxaa sii dheer, App flagship-ka shirkadda, Acorns Invest wax soo saar kaas oo bixiya “wareeg-wareeg” iibsiga lagu sameeyay kaarka ku xiran, App-ka ayaa dhowaan bilaabay adeeg cusub oo la yiraahdo 'Acorns Spend'.
5. Waxaad u Baahan Tahay Miisaaniyad (YNAB)
App -kan wuxuu dejiyaa soohdimaha inta lacag ah ee aad haysato, waxa kharashyadaadu yihiin, iyo marka kharashyadaadu u baahan yihiin in la xisaabiyo.
Waxay la socon kartaa lacag -bixinta joogtada ah iyo miisaaniyadda kharashyada joogtada ah ee yar. Ogaanshaha tani waxay ka caawin kartaa lamaanayaasha inay koontaroolaan baahidooda miisaaniyadda bil kasta.
App -kan wuxuu kaa caawin karaa inaad lacag badan ku keydsato dadaal aad u yar dhamaadkaaga.
Digit wuxuu tixgelin siinayaa dakhliga aad filayso, dheelitirka koontadaada, biilasha xiga, kharashaadkii ugu dambeeyay, iyo dookhyada ku jira lammaane ahaan, si aad u xisaabiso inta lacag ah ee aad kaydin karto.
Ka dib markaad u abuurto koonto Mint, oo aad ku xirato dhammaan akoonnadaada maaliyadeed koontadaada Mint - tani waxay si otomaatig ah u jiidi doontaa dhammaan macaamilkaaga waxayna isku dheelitirtaa mar kasta oo aad gasho oo aad koox koox u dhigato kharashyada caadiga ah, sida adeegyada iyo biilasha.
App -kan wuxuu leeyahay astaamo badan oo la mid ah waxa ay Mint bixiso.
Waxay si gaar ah ugu habboon tahay lammaaneyaasha da'doodu ka yar tahay, waxayna xoogga saarayaan inay wada dhisaan hanti muddo dheer ah.
App -kan, waxaad ku arki kartaa dhammaan akoonnadaada hal meel.
9. Horta hantida
Kani waa barnaamij miisaaniyad dhammaystiran oo dhammaystiran.
Waxaad ku dari kartaa koontadaada Wealthfront ee xaaskaaga liiskaaga qorshayaasha si aad u hesho aragti buuxda oo ku saabsan maalgelinta qoyskaaga.
App -kan waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu miisaaniyadda tooska ah ee lammaanuhu heli karaan.
Xusuusin marka shaqsiyaadka ay lacag iska dhigaan baqshadaha jirka, App-ka Mvelopes wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sameysato baqshado onlayn ah si aad lacag ugu qoondeyso hadafyada keydinta muddada-gaaban iyo kuwa fog.
App-kan wuxuu bixiyaa xoogaa tallaabooyin qiimo-dhimis aad u faa'iido badan si loogu adeego lamaanaha. Shirkaddu waxay leedahay bartilmaameed kaas oo ah inuu badbaadiyo macaamiisha iyo ganacsiyada yaryar ee qiyaastii $ 2.7 bilyan marka la gaaro 2025.
Isticmaalayaasha App -ka waxay u soo diraan Billshark nuqulo ka mid ah biilashooda waxayna kooxda hay'addu bilaabaysaa wada xaajoodka kaydinta.
Barnaamijka Trim wuxuu ka caawiyay isticmaaleyaashiisa inay keydsadaan wax ka badan $ 20 milyan iyo in ka badan $ 1 milyan bishii la soo dhaafay.
Waxay hoos u dhigtaa kharashaadka xad dhaafka ah iyada oo ka noqota diiwaangelintii hore iyo beddelka lacag -bixinnada dheeraadka ah iyada oo ka gorgortameysa qiimaha biilasha qofka, sida internetka, taleefanka, fiilada, iyo xataa biilasha caafimaadka.
App -ku wuxuu kaa caawinayaa inaad xisaabiso inta aad qarashgarayn karto - lacagta aad haysato (“jeebkaaga ku jirta”) ka dib markaad u baahan tahay inaad meel u dhigto baahiyaha iyo bartilmaameedyada.
Waxaad markaa isku xireysaa dhammaan kaararkaaga deynta, xisaabaadka bangiga, amaahda, iyo waxyaabo kaloo badan.
Muxuu Qabtaa App -ka Miisaaniyadda?
Barnaamijyada miisaaniyadda ayaa mar walba kaa caawin kara dabagalka dhaqaalahaaga gaarka ah.
Waa maxay Farqiga u dhexeeya App Budgeting iyo Software Accounting?
Waxaad ka soo dejisan kartaa barnaamijyada miisaaniyadda aaladdaada gacanta, kiniinno si aad u isticmaasho. Si kastaba ha ahaatee, ma aha dhammaan software -ka xisaabinta ee leh beddelkan.
Waa maxay guud ahaan App -ka miisaaniyadda ugu fiican?
Mint waxay fududeyneysaa in la keydiyo goolal badan. Waxaa sii dheer, Mint gabi ahaanba waa u bilaash in la soo dejiyo oo la isticmaalo, mana jiraan xulashooyin xubinimo oo lacag ah.
Waa imisa Qiimaha App -ka Miisaaniyadda?
Xaqiiqdu waxay tahay inay jiraan barnaamijyo qaarkood oo leh astaamo xaddidan, oo bilaash ka dhigaya, iyo kuwa kale oo leh aalado iyo astaamo aad u xoog badan ayaa leh kharash aad u yar oo iyaga la xiriira.
Barnaamijyada Miisaaniyadda ee Lammaanuhu ma yihiin kuwo ammaan ah in la isticmaalo?
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad wax uga qortid internetka, mar walba waa muhiim inaad hubiso inaad eegto amniga.
Xaqiiqdu waxay tahay in mar kasta oo ay timaaddo maareynta ama maareynta lacagta lamaanahaaga, marna ma aha go'aan fudud in la sameeyo. Tani waa sababta ay tahay inaad u tixgeliso ikhtiyaar la shaqayn karo si aad uga fogaato 'culayska lacagta.'
Waxaa jira barnaamijyo raadraac miisaaniyadeed oo aad u badan oo lammaaneyaasha halkaas jooga, iyada oo qaar badan oo iyaga ka mid ah si cad loogu talagalay inay kaa caawiyaan sidii lammaane, illaa heer aadan khaldami karin.
10 -ka ugu sarreeya Barnaamijyada Miisaaniyadda Bilaashka ah 2021 -ka
Sida Loo Kala Saaro Xisaabaadka Bangiyada ee Miisaaniyadda 2021 -ka
Maxay tahay in Miisaaniyadayda Xaashida Xaashidu ku jirto? Muunado & Template
10 Tallaabo oo Miisaaniyadda Loogu Sameeyay Hab Fudud 2021
10 Siyaabood Oo Fudud Oo Lacag Loogu Kaydsan Karo Miisaaniyad Adag Sannadkan
SIDA LOO CODSADO DEYN GANACSI OO YAR 10 TALLAABO OO FUDUD
10 Sababood oo ah inaan ka fariisto Kanada | Waxa kaliya oo ay tahay inaan ogaado
Kanada waa waddan isbarbar dhig ku dhow oo kaamil ah iyo daryeel caafimaad oo weyn. Waa hal meel oo ay ku taal…
Lacag intee le'eg ayay tahay inaan sameeyo: Istaraatiijiyadda Maaliyadeed ee Shaqsiga ee 2022
Meel kasta oo aad ka shaqaynayso iyo muddada aad shaqaynaysay, waxaad u baahan tahay inaad is waydiiso, “Immisa...
Dunidu waxay noqotay dhijitaal halkaas oo aad ka iibsanayso oo aad ku bixinayso adeegyada khadka. Sidoo kale, waxaad wareejin kartaa…
Qaybaha Miisaaniyadda Sanadka 2022: Tallaabooyin Fudud oo Si Degdeg Ah Loogu Dejiyo
Si kasta oo ay u yar tahay ama inta lacag ah ee aad haysato, waxaad u baahan tahay miisaaniyad. Dhab ahaantii, qof kastaa wuu sameeyaa, laakiin ...